Administer – Online Nepalaja
March 11, 2021 March 17, 2021 AdministerLeaveaComment on आयुर्वेद अनुसार एकदिनमा कति पानी पिउने, कुन समयमा पिउने ?
पानी कति र कसरी पिउने ? सधैं प्रयोगमा ल्याइरहने कुरा भए पनि यो जटिल विषय हो । तर यसविषयमा विषेशज्ञहरूबीच नै एक मत छैन । वास्तवमा हाम्रो शरीरमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्री बस्ने क्षेत्र, मौसम र शारीरिक बनोटको आधारमा पनि फरक हुने गर्छ । तर आयुर्वेदले यस विषयमा अलग राय प्रस्तुत गरेको छ […]
January 16, 2021 January 16, 2021 AdministerLeaveaComment on भारतीय समकक्षीसँग ज्ञवालीको प्रस्ताव- सीमा सम्बन्धी वार्ता तत्कालै थालौं
३ माघ, काठमाडौं । भारत भ्रमणका रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी एस जसशंकरसँग दुई देशको बीचमा रहेको सीमा विवादलाई समाधान गर्न तत्काल वार्ताको थालनी गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकअघि भएको एक्लाएक्लै वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । यद्यपि आयोगको औपचारिक बैठकमा सो विषयमा सामान्य छलफल भए पनि […]
अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गरेका छन्, जसमा दुईवटा माग राखिएको छ । पहिलो- विदेशबाट नेपालमा बिना अनुमति प्रसारण भइरहेका श्रब्यदृश्य सामग्रीको प्रसारण बन्द गर्नुपर्छ । दोस्रो- विदेशी विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) सामग्री मात्रै प्रसारण गर्न दिनुपर्छ । यदि रिट निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो भने युट्युब, नेटफि्लक्स, […]
December 19, 2020 January 16, 2021 AdministerLeaveaComment on मेस्सी-रोनाल्डोलाई पन्छाउँदै सर्वोत्कृष्ट बनेका लेवान्डोस्कीको यस्तो छ संघर्ष कथा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण २०२० को बालोन डे ओर अवार्ड रद्द भएपछि रोबर्ट लेवान्डोस्कीले आफ्नो निराशा लुकाउन सकेनन् । तर अन्ततः फिफा अवार्डमा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी छानिएपछि उनको खुशी फर्केको छ । लिओनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोसहित अन्तिम तीनको मनोनयनमा परेका लेवान्डोस्की शीर्ष स्थान हासिल गर्नेमा स्पष्ट जस्तै थिए । किन उनी नहुने […]
December 8, 2020 January 16, 2021 AdministerLeaveaComment on एक दिन देश को लागि पनि गोल गर्ने छु
काठमाडौं । फुटबल नै हो मेरो कथा । तर सुनाउन लायक कथा अझै बनिसकेको छैन । भर्खर दुई सिजन लिग खेलेँ । राष्ट्रिय टिमबाट एक खेल खेलेँ । फेरि राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा परेको छु । अझ मिहिनेत गर्नुछ । तर भर्खरै सकिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगले मलाई चर्चा दिलायो । सर्वाधिक गोलकर्ता बनेँ, सबैले […]
विष्णुगोपालको अध्यक्षतामा स्पोर्ट्स फर अल कमिसन गठन
December 8, 2020 January 16, 2021 AdministerLeaveaComment on विष्णुगोपालको अध्यक्षतामा स्पोर्ट्स फर अल कमिसन गठन
काठमाडौं । विष्णुगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गत ‘स्पोर्ट्स फर अल’ कमिसन शुक्रबार गठन गरिएको छ । कमिटी अन्तर्गत रहने कमिसनमध्ये सबैभन्दा सक्रिय रहँदै आएको यस कमिसनले अबको वर्षमा खेलकुदबारे जनचेतना ल्याउन विविध कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले कमिसन गठनको कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै यस संस्थाले आम […]
बार्सिलोनाको 30 बर्ष कै अनअपेच्छाकृत खेल प्रदर्शन
December 8, 2020 January 16, 2021 AdministerLeaveaComment on बार्सिलोनाको 30 बर्ष कै अनअपेच्छाकृत खेल प्रदर्शन
काठमाडौं । शनिबार काडिजसँग पराजित भएपछि जायन्ट क्लब बार्सिलोनाले स्पानिस ला लिगामा अर्को झड्का सामना गर्नुपर्‍यो । रोनाल्डो कोएमनको टिमले २०२०-२१ को सिजनमा निकै खराब सुरुवात गरेको छ । शुरुवाती १० खेलमा बार्सिलोनाले जम्मा १४ अंक मात्र जोडेको छ । २६ अंकसहित एट्लेटिको मड्रिड ला लिगाको अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा छ । ११औं स्थानमा रहेको […]
November 26, 2020 January 3, 2021 AdministerLeaveaComment on कोशीको पानी मेची लैजान ४९ अर्ब लगानी गर्दै भारत, नेपाल बेखबर
११ मंसिर, काठमाडौं । कोशी नदीको पानी मेची नदीमा पुर्‍याएर आफ्नो भूमि सिँचाइ गर्ने भारतको महत्वाकांक्षी परियोजना एक कदम अगाडि बढेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो परियोजना कोशी–मेची रिभर इन्टरलिनिङ प्राजेक्ट हो । जस अनुसार वर्षायाममा कोशीमा जम्मा गरेको पानी हिउँदमा भारतमा पर्ने मेची नदीमा खसालिनेछ र भारतका सुख्खा खेतमा सिँचाइको लागि उपयोग […]
ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद छिटो टुंग्याउन चाहन्छौं
November 26, 2020 March 11, 2021 AdministerLeaveaComment on ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद छिटो टुंग्याउन चाहन्छौं
११ मंसिर, काठमाडौं । नेपालले ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरुका आधारमा वार्ता र सम्वादमार्फत सीमाविवाद छिटो टुंग्याउन चाहेको सन्देश भारतलाई दिएको छ । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले बिहीबार काठमाडौं आएलगत्तै नेपाली समकक्षी भरतराज पौड्यालसँग द्वीपक्षीय वार्ता गरेका थिए । त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी […]
September 9, 2020 January 16, 2021 AdministerLeaveaComment on सिमेन्ट कारखानाको कालो धुवाबाट नेपालमै बनाउन सकिन्छ मल